Mukhtaar Roobow oo Weli Xidhan iyo Ololaha Doorashada Koonfur Galbeed oo Halkeedi Ka Sii Socota | Baligubadlemedia.com
Mukhtaar Roobow oo Weli Xidhan iyo Ololaha Doorashada Koonfur Galbeed oo Halkeedi Ka Sii Socota
Mukhtaar Roobow Cali Abu-Mansuur oo ka mid ah musharrixiinta u tartameysa jagada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa weli xiran iyada oo ay ololaha doorashada Musharrixiinta doorashada ay maanta ka billaabatay magaalada Baydhaba.
Magaalada Baydhaba oo ay maalmahanba rabshado ay dad ku dhinteen qaar kalana ku dhaawacmeen oo ka dhashay xarigga Mukhtaar Roobow cali Abu-Mansuur ayaa lagu soo warramayaa iney maanta xaaladda magaalada deggan tahay.
Waxaana magaalada Baydhaba ololahooda doorashada si rasmi ah uga billaabay musharrixiinta Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyada oo ay jirin wax isbeddel ah oo lagu sameeyey jadwalka doorashada u yaallay iyada oo uu xiran yahay Mukhtaar Rooboow oo ka mid ah Musharrixiinta oo guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed uu guddoonsiiyey shahaadada musharraxnimada isaga oo buuxiyey shuruudaha musharraxnimada.
Musharraxiinta kala ah Aadan Maxamed Nuur (Aadan Saransoor), Xuseen Cusmaan Xuseen iyo Ibraahim Macallin Nuur ayaa maanta khudbaddooda jeediyay
Wasiirka warfaafinta maamulka Koofur-galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi oo BBC u warramay ayaa wuxuu sheegay “iney geeddi socodka doorashada ay gacanta ku hayaan Guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed xildhibaannada baarlamaankana ay waajibaadkooda u gudanayaan si waafaqsan jadwalka Guddiga horay ugu yaallay.”
Guddiga doorashooyinkana waxay sheegeen ayuu yiri “xiritaanka mukhtaar Rooboow iyo Doorashada Koonfur galbeed ay isku xirneen taasoo tusaale cad inooga filan maanta sida ay musharrixiinta hadhay ugu heellanaayeen iney doorashada horay u sii socoto.”
“Waxaana maanta ololahooda doorashada soo bandhigay seddex ka mid ah musharrixiinta iyada oo labada musharrax ee hadhayna ay maalinta barri ah shacabka hor imanayaan barrina la nasanayo doorashadana ay dhaceyso maalinta Arbacada ah.”
Baaqa Odayaasha deegaanka Maamulka Koonfur Galbeed siduu u arkaa?
Wasiirka warfaafinta maamulka Koofur-galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed mar uu ka hadlayey baaqi odayaasha Koonfur Galbeed ay soo jeediyeen ayaa wuxuu sheegay “Doorashada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ka dhaceysa sideedaba waxaa u xilsaaran Baarlamaanka Koonfur Galbeed, iyagaana xaq u leh iney 19-ka bishan doortaan Madaxweynaha Cusub ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.”
“Odayaasha dhaqanka dareenkooda waan maqalnay laakiin dareen maanta dowladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashadeeda dib loogu dhigo ma muuqdo iyada oo ay jirtay dhawr jeerba in doorashada dib loo dhigay.”
“Wasiir Ugaas Xasan waxaa kale uu sheegay inuu rajeeynayo wixi khilaafaad ee jira ama kala duwanaasha aragtidana iney dhammaan doonto madaxweynaha la dooran doonanan gogol dhig uu sameyn doono.